अस्ट्रेलियाको मेलबर्नमा ६ साता लकडाउनको घोषणा – Sandesh Munch
२३ असार, काठमाडौं । अस्ट्रेलियाको मेलबर्नमा ६ साताका लागि लकडाउनको घोषणा गरिएको छ । भिक्टोरिया राजयका प्रिमियर डेनिअल एन्ड्र्युले मंगलबार कोरोना भाइरसको संक्रमण बढिरहेको भन्दै मेलबर्नमा ६ साता लकडाउन गरिने घोषणा गरेका हुन् । यो लकडाउन बुधबार मध्यरातिदेखि लागू हुनेछ ।
Prevपारिश्रमिकमा नयाँ कलाकार हो, यसको मैले करिअर नै उद्धार गरिदिए भन्ने सोचेर निर्माताले नयाँलाई पारिश्रमिकमा मार्नु पनि गलत हो । चलेका भनिएका कलाकारले पनि जति मागे पनि दिइहाल्छ भनेर निर्मातासँग मनपरी पैसा माग्नु पनि गलत हो । #Nepalimovie #Nepaliartist
Nextटिकटकसहित चिनियाँ एप्समाथि अमेरिकाले पनि प्रतिबन्ध लगाउँदै
घरमा कमिला आयो भने के हुन्छ ? शुभ कि अशुभ ? भिडियोसहित
कोरोनासंक्रमणबाट वीरगन्जमा एकै दिन ३ जनाको मृ त्यु